Egwuregwu 3 E Na-ewu ewu Maka Ere - Na-egbo Mkpa Gị | ebike Shuangye
Mbido blog News Egwuregwu 3 E Na-ewu ewu Maka Ere - Na-egbo Mkpa Gị
Datebọchị ： 2020-07-22 Categories ：News Nlele ： 2,293
Inweta igwe kwụ otu ebe nwere ike ịme ka ịnya igwe ogologo, ọsọsọ na n’iru. Idingnyịnya igwe eletrik bụ ohere dị mma iji teta utịn ma nwee ntụrụndụ n'oge ọkọchị a. N'oge na-adịbeghị anya, ihe omume dị n'èzí dị ka skate bọọdụ eletriki, ndị okenye e-skooters na igwe kwụ otu ebe, na-ewu ewu n'etiti ndị otu niile. Nke a bụ ihe kpatara ya e na anyịnya igwe jụọla ọchịchịrị? N'ihi na ugbu a, e-igwe kwụ otu ebe na-ele anya ihe ọgbara ọhụrụ ma jie ike zuru ezu iji bulie gị ruru 40 ruo 60km n'otu ụgwọ.
Yabụ, kedu ụdị igwe eletriki e na-ere maka adabara ndị ahịa gị mgbe ha na-atụle ịzụta igwe eletrik? Nke a bụ ajụjụ dị mkpa. Azịza ya na-emetụta nhọrọ nke igwe kwụ otu ebe. Kedu otu ị ga - esi ahọrọ ụdị igwe kwụ otu ebe maka isi ahịa gị? Enwere ọtụtụ ịhọrọ site na ebike obodo ochie, ugwu ugwu ma ọ bụ ọbụna mpịachi ebike. Nke a post ga-akwado 5 anyịnya igwe na-ewu ewu maka ọrịre.
1. Zoro ezo batrị ugwu
Site na igwe igwe eji agba oso ma tinye batrị batrị zoro ezo- onweghi onye gha achoputa na obu eletrik. Ya n'ozuzu anya ike, ọma ewu na ikeegwuregwu. Nke a bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe maka ire ere nke ga-akpọga gị n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs gaa n'èzí egwuregwu. E nwere ọtụtụ nke ujo absorption site nkwusioru aluminum alloy n'ihu ndụdụ, na 26-anụ ọhịa wheel, ọbụna 27.5 ″ na 29 ″ wiil aka bike n'elu dị iche iche patchy ụzọ mfe.
Nke a 36V 10AHlithium batrị bụ nke mbughari, mma ka bụkwa otu uru batrị. Ọ dị mfe iji igodo wepụ, were ya gaa ebe ọzọ iji kwụọ ụgwọ na-enweghị ebugharị igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ ezie na usoro gia bụ otu n'ime azụmaahịa kachasị mma, ọkọlọtọ ọkọlọtọ bụ gia 21. N'otu aka ahụ, nkpuchi breeki n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma, na-ewetara gị nkwụsịtụ nchekwa ọbụlagodi ọsọ. Oke ọsọ dị 25km / h ruo 35km / h dịka ike dị iche iche sitere na 250w ruo 500w moto. Ma ọ bụrụ na onye ahịa gị nwere ike isochi njem ha, igwe kwụ otu ebe a maka ọrịre na-enyekwa ihuenyo LCD yana ezigbo data stats.
2. Bọọlụ eletrik nke obodo iri abụọ na isii
Onye ọ bụla nwere ọtụtụ ihe ọchị n'okporo ámá obodo na e-bike obodo. Nke mbụ, nke a bụ igwe kwụ otu ebe kachasị elu maka ọrịre. Ewubere ya iguzogide ogologo oge di iche-iche na njem di iche iche tinyere ugwu. Na kpochapụwo nzọụkwụ-site imewe, ọ na-ese akwa ọ bụla ọnọdụ. Ogwe osisi aluminom ọ bụghị naanị na ọ dị fechaa mana ọ na-adịgide adịgide, ọbụlagodi mgbe igwe eletrik na-ahapụ n'èzí. Obodo a, igwe kwụ otu ebe maka ọrịre na-abịa site na iji ihe eji arụ ọrụ breeki na 21 ga-adị mfe ịnya. Ejikọtara ọnụ, ndị a na-enye gị osooso ọsọ ọsọ, nduzi ziri ezi, yana nkwụsị dị mma.
N'iji imebe batrị zoro ezo na batrị nke mbugharị 36v 10ah, batrị ahụ na-akwụ ụgwọ kpamkpam na awa 4-6, nke bụ otu ihe ahụ ọ bụla maka e-anyịnya igwe ma mee ka igwe kwụ otu ebe ga-agagharị 40km ruo 60km n'otu ụgwọ. Ejiri ngwongwo na-enweghị 350W dị elu nke na-enweghị ihe eji agba ọsọ, nke na-enye gị ohere ịga ọsọ ọsọ 30km / h max, na-enweghị mgbanwe mgbanwe akụ.
3. 26 ”ike taya igwe kwụ otu ebe
Na-achọ igwe dị ogologo igwe eletriki igwe na-adịgide adịgide? Kedu ihe kpatara na ị họrọghị nke a. Ebube ma wuru nke ọma, igwe kwụ otu ebe a maka ire ere nwere akparamagwa na etu esi atụ egwu igosi ha. Ogwe osisi 26 * 4.0 na-enye ọtụtụ njide nke ga-eme ka ị ghara ịga n'ihu site na ihe dị larịị ruo n'okporo ámá. Ogwe alloy aluminom na eme ka igwe eletriki a na-acha odo odo ma na-eyi ike, n'otu oge. Isi mkpịsị aka aka na 21 gia nke ga - enyere gị aka ịbawanye ọsọ ruo 30-40km / h. Ike dị elu na ikike dị ukwuu bụ igwe eletrik eletrik a bụ otu n'ime ihe ngosi, bia na 350w ruo 750w brushless motor na 36v ka 48v batrị lithium na-ewepu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara ụgbọ mmiri e-ewu ewu maka ọrịre, ịnwere ike ịchọgharị ederede gara aga ma ọ bụ gaa na nke anyị Ụlọ Ọrụ Weebụ, nwekwara ike ịhapụ ozi gị n'okpuru.
Tags:e igwe kwụ otu ebe maka ọrịre ewu ewu e
Mbụ: Gini bu igwe inyeaka aka?
Next: 4 ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ igwe eletriki ugboala